Igbo Amaka Tv Abiawo. - NDỊ IGBO KWENU
Home / Featured / Igbo Amaka Tv Abiawo.
ndiigbokwenu1 April 5, 2016	Featured, NTỤRỤNDỤ Leave a comment 2,301 Views
Igbo Amaka bụ ihe onyonyo ọhụrụ n’egosi na Africa Magic Igbo, Channel 159. Ọmalicha ada igbo Ngozi Nwosu ama-ama n’ọrụ ntụrụndụ bụ onye nnabata n’ihe onyonyo a. Ọ ga n’elebeanya n’ihe dị iche-iche n’eme n’ala igbo kita. Ngozi ga na-ahazi okwu dị ọtụtụ ụmụ igbo mkpa. N’ime nkiri a, Ngozi Nwosu na ụmụigbo bụ ndị ọkachamara ga entinye ọnụ n’okwu dị iche-iche dịka omume ezinụlọ, azumahia, mmekọ nwoke na nwanyị, omume ụmụaka na ndị nne na nna, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ n’amasị ụmụigbo.
Ha ga enyere ụmụigbo aka ghọta otu ihe siri dị n’oge mbu, ihe kpatara ọtụtụ nsogbu anyị n’enwe kita, na ihe anyị puru ime ka ihe gaziere anyị nma ebevbụla anyị nọ. Ha ga akụziri anyị ụdịrị omume ndị nna nna anyị mere n’oge mgbe gbuo kpatara udo jiri dị n’obodo mgbeahu. Ha ga-agwakwa anyị uru ụfọdụ omume ndị beeke mara nma nwere ike ibara anyị na otu anyị kwesiri inabata omume ndịa si mba bata ka ha hapụ iyasara anyị ọmalicha omenala anyị nwere.
Soro nu ha na facebook na Igbo Amaka Tv Kesaa ozi a ka mmadụ nile mara maka ezigbo ihe Onyonyo a. Pia link a ka ị soro Igbo Amaka Tv na Youtube ma kirie nkiri ọhụrụ ha meputagoro
Previous Ebe ọ na kpọtu
Next Ebe Ngoli